Kani waa Galaxy Fit, jijin cusub oo waxqabad Samsung ah | Wararka Gadget
Jose Rubio | | Qalabka la gashan karo, qalabka
Samsung ayaa ka faa'iideystay Dhacdo aan xirneyn, maxaa yeelay waxaa u dheer soo bandhigida taleefannadooda cusub ee dhamaadka-sare, Galaxy S10 iyo Galaxy Fold, sumadda korean ayaa sidoo kale bilaabay dhowr qalab oo dheeri ah, oo sidoo kale loo yaqaan duurjoogta. Oo ay la socdaan casriga kor ku xusan, iyo smartwatch cusub, ka Galaxy Firfircoon, ayaa soo bandhigtay jijimooyin cusub oo waxqabad ah Galaxy Fit iyo Galaxy Fit e.
In kasta oo Galaxy Active aan xoogaa daadinay dhacdada ka hor, awoodna u yeelan karno inaan abuurno rajo aan ka heli doonno maanta Baakadka, marka laga hadlayo Galaxy Fit waa ka duwan tahay, maadaama ay ku saabsan tahay qalab aan ficil ahaan cidina fileynin, iyo maxaa ku yimaada beddel qalabka Gear, ku biirista xilligan dhammaan dharka la gashado ee ku jira Galaxy ga.
1 Qeexitaannada 'Galaxy Fit'
2 Shaxda isbarbar dhiga Galaxy Fit
3 Ku darista kala duwanaanta Galaxy
Qeexitaannada 'Galaxy Fit'
Qeybta cusub ee Galaxy Fit gudaheeda, waxaan ka helaynaa, si la mid ah dhacdooyinka leh Samsung Galaxy S10, hal magac-bixin cusub oo qeexaysa nooc la fududeeyay ee sheyga. Taasi waa, marka lagu daro ah Galaxy Fit, ah Galaxy Fit e.
Kala duwanaanshaha u dhexeeya labada nooc been badanaa shaashaddaahaansho midabkeedu yahay Galaxy Fit iyo madow iyo caddaan oo ku yaal Galaxy Fit e. Waxaan sidoo kale helnaa, sida farqi muuqaal oo muuqaal ah, a kala duwan oo midabyo u dhexeeya labada nooc ee jijin cusub ee Samsung, isagoo awood u leh inuu kala doorto madow iyo lacag ah qaabka caadiga ah, halka xulashooyinku sii ballaadhiyaan madow, caddaan iyo jaalle qaabka ugu jaban, isagoo siinaya muuqaal isboorti iyo muuqaal aan rasmi ahayn.
Laakiin way cadahay in meel ay ahayd inay gooyaan si ay ugu awoodaan inay alaab qiimo jaban ku bixiyaan. Marka lagu daro shaashadda madow iyo caddaan ee Galaxy Fit e, sida aan ku arki doonno jadwalka isbarbardhigga ee hoose, waxaan ka helnaa cufnaanta pixel hoose. Tani waxaa laga yaabaa in shaashaddaas yar aysan muhiim u ahayn sida laga yaabo inay ku leedahay taleefanka casriga ah, laakiin waa faahfaahin la tixgelinayo.
Si la mid ah ayaa ah farqiga udhaxeeya RAM, oo lagu labalabeeyay Galaxy Fit marka loo eego qaabka e, iyo batteriga waxaa ku dhaca hoos u dhac ku dhow 50% qaabkan ugu dambeeyay, imanaya illaa toddobaad inta udhaxeysa rarka iyo rarka ugufiican.
Shaxda isbarbar dhiga Galaxy Fit
Color Madoow-qalin Madow-Cadaan-Jaale
Screen 0.95 "Midab Buuxi AMOLED 0.74 "PMOLED
Xallinta 120 x 240 - 282 ppi 64 x 128 - 193 ppi
Gacaliye MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16MHZ MCU Cortex M0 96MHz
Cabbirka X x 18.3 44.6 11.2 mm X x 16.0 40.2 10.9 mm
Miisaanka leh suunka Gram 24 Gram 15
Kaydinta 32MB ROM 4MB ROM
Batariga 120 Mah 70 Mah
Sensors Wadnaha + Accelerometer + Gyroscope Garaaca wadnaha + Accelerometer
Load NFC wireless Pogo
Ku darista kala duwanaanta Galaxy
Si ka duwan Samsung Gear Fit iyo Gear Fit 2, ayaa Galaxy Fit wuxuu leeyahay shaashad fidsan, isagoo ka tegaya shaashadda qalooca ee kuwii ka horreeyay. Iyada oo qaybtan qaabeynta ah ku guuleysto fudeyd oo waxay u oggolaaneysaa kaydinta kharashka ee isticmaalaha ugu dambeeya shaki la'aan uu qadarin doono, iyadoon loo eegin nooca ay doortaan.
Iyada oo la tartameysa boqoradda jijimooyinka waxqabadka, Xiaomi Mi Band, Samsung waxay rajeyneysaa inay sii ballaariso suuqgeeda gaarka ah, oo bixiya wax soo saar magaciisu yahay dammaanad tayo, sida ku dhacday inta ka hartay wax soo saarka Galaxy, kuwa adeegsada ee aan awoodin inay bixiyaan lacag aad u badan iibsiga wax la iibsan karo, ama kuwa raadinaya taxane ah Astaamaha ka fudud kan smartwatch ayaa bixiya, sida cusub Galaxy Firfircoon.
In kasta oo aan shaki ku jirin, Galaxy Fit waa diiradda saaray kormeerka aasaasiga ah inta lagu jiro tababarka isboortiga, laga bilaabo diiwaanka jimicsi kasta mar kasta oo aan bilowno inaan sameyno, iyada oo aan loo dhigin ama aan u qaabeyno wax cabbir ah jijinteena. Dabcan, sidoo kale waa awood la soco heerka hurdada iyo garaaca wadnaha, oo na siinaya macluumaad ku saabsan kuwan, iyo sidoo kale tilmaamaha lagu horumarinayo caafimaadkeena.
In kastoo Samsung wali ma xaqiijin qiimaha rasmiga ah, Qiyaasta sicirka ayaa la filayaa inay udhaxeyso kudhowaad € 30 oo qiimaha Xiaomi Mi Band, tartankiisa ugu weyn, iyo in kabadan € 130 ee hada Gear Fit 2 kharashka. Lama sheegin taariikhda iibinta midkoodna., inkasta oo aysan caqli gal noqon doonin in laga fikiro in la heli doono laga bilaabo 8-da bisha soo socota ee Maarso, maadaama ay ku dhici doonto smartwatch-ka cusub ee qoyska Galaxy-ka, ee Active Galaxy.
Noqo sida ay noqon karto, ugu dhakhsaha badan qoyska Galaxy wuxuu kori doonaa si uu ula qabsado baahida isticmaale kasta, Shaki nagagagama jiro in Galaxy Fit-ka cusub, iyo waliba nooca la fududeeyay, ee Galaxy Fit e, uu noqon doono moodellada ugu caansan uguna baahsan iibsadayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Kani waa Galaxy Fit, jijin cusub oo firfircoon oo Samsung ah
Isbarbardhiga u dhexeeya Galaxy S10, S10 + iyo S10e